Home बैदेशिक रोजगार बैदेशिक रोजगार ! मकाउ र युएइमा सेकुरिटी गार्डको राम्रो तलब सुविधा । जानकारी डिमाण्डमा हेर्नुहोला
December 18, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, Leaveacomment
बैदेशिक रोजगारमा मकाउ र युएइमा सेकुरिटी गार्डको लागि कोटा उपलब्ध। मकाउ देशको मकाउ शहरमा अबस्थित प्रतिष्ठित कम्पनी विनर वे सेकुरिटी कम्पनि बाट १०० जना सेकुरिटी गार्ड माग भै आएको। कम्पनि को माग सम्बन्धि बिज्ञापन आजको कान्तिपुर दैनिकमा हेर्न सकिन्छ।
वर्ल्ड वाइड हुमन रिसोर्समा आएको डिमाण्ड अनुसार कम्पनीका अनुसार हप्ताको ६ दिन काम गर्ने , ओभरटाइम सुबिधा कम्पनीले तोकेको नियम अनुसार , दैनिक काम गर्ने समय ८ घण्टा रहेको छ बिज्ञापन मा उल्लेख छ। कम्पनीले कामदार छनौट तरिका लिखित र अन्तर्वार्ता तोकेको छ। अन्तर्वार्ता धमाधम भैरहेको छ।
बार्षिक बिदा उपलब्ध छ , खान सुबिधा छैन भने बस्ने सुबिधा दिएको छ। करार अबधि २ बर्ष तोकेको छ। उमेरको हक मा २२-३६ बर्ष तोकेको छ। सैशिक योग्यता को सम्बन्धमा एस एल सी पास वो सो भन्दा माथि पढेको हुनु पर्नेछ। कामदारले नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी , सैनिक वा कुनै सेकुरिटी गार्डमा यस अघि काम गरेको हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। उचाइ १७३ सेमि भन्दा अग्लो हुनुपर्ने लेखेको छ भने अंग्रेजीमा लेख्न र पढ्न र बोल्न जान्ने हुनु पर्ने लाइ अनिबार्य प्राथमिकतामा राखेको छ। थप जानकारीका सम्बन्धित नम्बरमा फोन गर्न सकिने वा डिमाण्ड हेर्नु होला
बाकि जान्न तलको डिमाण्ड हेर्नुस होला
युएइ देश अबस्थित प्रतिष्ठित कम्पनी वर्ल्ड सेकुरिटी कम्पनि बाट ६७ जना सेकुरिटी गार्ड माग भै आएको। यस कम्पनि को माग सम्बन्धि बिज्ञापन आजको कान्तिपुर दैनिकमा हेर्न सकिन्छ। अन्तर्वार्ता भैरहेको छ , फाइनल अन्तर्वार्ता पुस ८ गते हुने बिज्ञापन मा उल्लेख छ।
उपहार ह्युमन रिसोर्स मेनपावरमा उपलब्ध डिमाण्ड अनुसार कम्पनीका अनुसार हप्ताको ६ दिन काम गर्ने , ओभरटाइम सुबिधा कम्पनीले तोकेको नियम अनुसार , दैनिक काम गर्ने समय ८ घण्टा रहेको छ बिज्ञापन मा उल्लेख छ। कम्पनीले कामदार छनौट तरिका लिखित र अन्तर्वार्ता तोकेको छ। अन्तर्वार्ता धमाधम भैरहेको छ। तलब : ६० हजार तोकेको भएपनि ओभर टाइम सहित ७५ हजार हुने कम्पनीले विज्ञापनमा छापेको छ।
बार्षिक बिदा उपलब्ध छ , खान सुबिधा छैन भने बस्ने सुबिधा दिएको छ। करार अबधि २ बर्ष तोकेको छ। उमेरको हक मा २१ -३८ बर्ष तोकेको छ। सैशिक योग्यता को सम्बन्धमा एस एल सी पास वो सो भन्दा माथि पढेको हुनु पर्नेछ। कामदारले नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी , सैनिक वा कुनै सेकुरिटी गार्डमा यस अघि काम गरेको हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। उचाइ ५ फीट ६ इन्च अग्लो हुनुपर्ने लेखेको छ भने अंग्रेजीमा लेख्न र पढ्न र बोल्न जान्ने हुनु पर्ने लाइ अनिबार्य प्राथमिकतामा राखेको छ। थप जानकारीका सम्बन्धित नम्बरमा फोन गर्न सकिने वा डिमाण्ड हेर्नु होला
युरोपको पोल्यान्डमा नेपालीका लागी रोजगारी, तलब्- १ लाख माथी
बैदेशिक रोजगार - युएइको अबुधाबीमा ५ तारे होटलमा रोजगार ! तलब - १ लाख १८ हजारसम्म
Posted in बैदेशिक रोजगार, रोजगार.
नेपाल आइडल ग्रान्ड फिनाले हेर्न जाने हो ? यसरि किन्न सकिन्छ ग्राण्ड फिनालेको टिकट
नेपाल आइडल ग्राण्ड फिनालेको तयारि ! कसले जित्छ आइडल ? ( भिडियो सहित )
June 7, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर , No Comment
April 30, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर , No Comment
January 16, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर , No Comment